वैज्ञानिकले पत्ता लगाए क्यान्सर उपचारको नयाँ तरिका ! प्राध्यापक ग्रेग हेननले बीबीसीलाई भने , क्यान्सरको उपचारमा यो एक बिल्कुलै नयाँ र आधुनिक तरिका हो ।’ - Enepal Serofero
उनी थप्छिन्, ‘टुडी भर्सन हामी पनि प्रयोग गर्छौं । त्यसको तुलनामा थ्रीडी सिस्टम निकै उत्कृष्ट छ ।’ – From : Dailygorkhali.com
Prevम १६ वर्षीया किशोरी हुँ । यौन सम्पर्कपछि मेरो योनिबाट ग्याँस बाहिर निस्किएजस्तो आवाज आउँछ । यस्तो आवाज आउनुको कारण के हो ?
Next९८ % व्यक्तिहरुलाई थाहा छैन शारीरिक सम्बन्ध पछि गर्नै पर्ने यो काम